QM iyo Guddiga xalinta khilaafaadka oo ku shiray Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta QM iyo Guddiga xalinta khilaafaadka oo ku shiray Muqdisho
QM iyo Guddiga xalinta khilaafaadka oo ku shiray Muqdisho
Wakiilka xog-hayaha guud ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating, ayaa kulan albaabada u xirnaayeen la qaatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, iyagoo ka wadahadlay go’aankii dhowaan ay soo saareen guddiga.
Danjiraha iyo guddiga ayaa lagu waramayaa in ay ka wadda hadleen arrimo la xiriira go’aankii dhawaan ka soo baxay guddiga kaasi oo ay ku laaleen 11 kursi oo ka mid xildhibaanadii lagu soo doortay xarumaha maamul goballeedyada dalka, kaddib markii lagu eedeeyay in ay ku soo baxeeen hab aan wafaqsaneyn nidaamka doorashada.
Lama oga waxa ay isku soo qaadeen guddiga iyo danjiraha QM, kaddib markii go’aanka soo baxay uu buuq siyaasadeed iyo khilaaf hor leh ka dhax abuuray guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo maamul gobolledyada oo ku gacan-seyray.
Ugu danbeyntii, beesha caalamka ayaa hore ugu baaqday hogaamiyayaasha madasha wadda tashiga in ay si dhaw ula shaqeeyaan guddiyada kala gadisan ee doorashada loona daayo go’aamada ay qaataan.
Previous articleAkhriso: Afar maamul-goboleed oo si wadajir ah u diiday Go’aankii Guddiga Xalinta Khilaafaadka
Next articleQM oo GXKD waydiisay sababta ay 13 kursi oo dood ka taagnayd looga saaray kuraastii la laalay
Dacwad Oogaha Kenya Oo amray Xariga Guddoomiyaha Ismaamulka Gaarisa